Posted by ညီလင်းသစ် au 18.4.11
Beautiful sunrise.Good start for new year.Thanks for your wish and same to you.The pre full moon is very beautiful on the lake tonight.Tomorrow will be more:)
လှလှပပ ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ လှလှပပ ဆုတောင်းစကားလေးတွေ အစ်ကိုလည်း မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်လေးဖြစ်ပါစေဗျာ ။
မိသားစုအားလုံးပျော်ရွှင်ကျန်းမာမယ့် နှစ်သစ်မင်္ဂလာဖြစ်ပါစေ .................
စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျမ်းမာ မင်္ဂလာနှစ်မြတ်မှာ။
အစစအရာရာ ပိုပြီးတိုးတက်အောင်မြင်တဲ့ နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေရှင်
ပုံလေး တွေ အတွက်ကျေးဇူး
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ၊ လပြည့်ညကို စောင့်ကြည့်လိုက် ဦးမယ်..၊း)
မမီးငယ်တို့ မိသားစုလေးလည်း ကျန်းမာပါစေဗျာ..၊
ဟုတ်တယ်ဗျို့၊ အခုမှ အသစ်တွေချည်းပဲ၊ အင်း.. ဘလော့ဂ်ပါ အသစ်ပြောင်းရင် ကောင်းမလားပဲ..၊း)
မင်္ဂလာပါ၊ မတွေ့တာ ကြာပြီ....၊
ဆုတောင်းလေးအတွက်ရော လာလည်တဲ့ အတွက်ပါ ကျေးဇူးပါပဲဗျာ..၊
အရင်က ဧရာဝတီမြစ် တဖက်ကမ်းကို အစောကြီး
သွားတဲ့နေ့မျိုးတွေဆို ဒီလိုရှု့ခင်းတွေ မြင်ရလေ့ရှိတယ်
မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ အစ်ကိုရေ... အစ်ကိုတို့ မိသားစုလေးလဲ ပျော်ရွှင်ပါစေနော် :)
ကြည်နူးစရာ မြင်ကွင်းလေးတွေနဲ့ ....
မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်လေး ဖြစ်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြု
ဆုတောင်းရင်း ကောင်းသောနေ့လေး ဖြစ်ပါစေအကို။
ရလာတဲ့ ရလဒ်ကုိုကြည့်ပြီး အားထုတ်ရတာအချည်းနှီးမဖြစ်ဘူးလို့ ခံစားရပါတယ်။ ဒုတိယပုံကို ပိုကြိုက်ပါတယ်။ ပ ပုံရဲ့ ဘယ်ဘက်ဘေးနားလေးက ရေထဲက မဲမဲအရာက ဒုတိယပုံမှာ မရှိတော့ ပုိုပြီး သဘာဝအလှကိုခံစားရတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
HAPPY Happy New Year to you, Brother!
နှစ်သစ်မှာ ချစ်တဲ့ မိသားစုနဲ့အတူ ကျန်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်အောင်မြင်ပါစေ။
ဟင်းများများ ချက်ပြီး ဓာတ်ပုံများလက်စွမ်းပြနိုင်ပါစေ။
ဘလောခ့်လည်း များများရေးနိုင်ပါစေ။ :-D
မင်္ဂလာပါဗျာ၊ ကျနော်လည်း ပုံကိုပြန်ကြည့်ပြီး စစ်ကိုင်းတောင်နောက်ကို နေဝင်သွားတဲ့ အချိန်တွေ ပြန်သတိရမိတယ်...၊
ကျေးဇူးပါနော်၊ ချစ်ခင်သော သူတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာ အချိန်တွေ ပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့လည်း ပြန်ဆုတောင်း ပါတယ်..၊
နှစ်သစ်ဆုတောင်း အတွက်ရော အမြဲတမ်း ချန်ထားတတ်တဲ့ 'ကောင်းသောနေ့လေး ဖြစ်ပါစေ' အတွက်ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညီမရေ..၊း)
ထပ်တူ ပျော်ရွှင်ပါစေနော်...၊ ကျေးဇူးပါ၊
မင်္ဂလာပါ၊ ပုံတွေကို အသေးစိတ် ကြည့်ပြီး အကြိုက်ကို ပြောခဲ့လို့ ကျေးဇူးပါပဲဗျာ၊ ဟုတ်တယ်၊ ကျနော်လည်း ဒုတိယပုံကို ပိုကြိုက်တယ်...၊
wow... တယ်လည်း ပြည့်စုံတဲ့ ဆုတောင်းပါလား၊း)
တသီတတန်းကြီးနဲ့ ကျနော်လုပ်ချင်တာတွေ အားလုံး ပါသွားတယ်၊ ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်..၊ လပြည့်လည်း ကျောနာ၊ ခါးနာတာတွေ ပျောက်ကင်းပြီး ပရောဂျက်တွေ များများ လုပ်နိုင်ပါစေဗျာ....။
မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ ညီလင်းသစ်ရေ... ပုံလေးတွေကောင်းလိုက်တာ... ရိုက်တဲ့သူကလဲတော် ရိုက်တဲ့ကင်မရာကလဲ အကောင်းစားဖြစ်မယ်နော်...
ရင်ထဲကိုအေးသွားစေတဲ့ ပုံလေးတွေနဲ့ မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါလား
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ၊ ကင်မရာကပဲ အကုန်လုပ်သွား တာပါ၊ ကျနော်က သူ့ကို ကိုင်ထားရုံ သက်သက်..၊းD
nice photos.tks for shearing.
ကန်ထဲကရေတွေတောင် အဲဒီလို အရောင်ဖြစ်နေတယ်၊ (အောက်ပုံ)
သဘာဝအရောင် ဖွဲ့စည်းမူက သိပ်လှတယ်၊
အပေါ်ကအလင်းနဲ့ အောက်ကအလင်း ကြားမှာ ခွဲခြားပေးထားတာက Tonal Value တွေ၊
အမှန်ပါပဲ၊ Tonal value တွေက ပုံတွေမှာ အရေးကြီး တာကိုး...၊ အခုလို သေသေချာချာကြည့်ပြီး မှတ်ချက် ပေးသွားလို့လည်း ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်နော်..။